99 Indawo ye-BSF iMaggot Ranch • Yurie BSF
Indawo ye-BSG iMaggot ifama ngaphandle kokuNuka
Ufuna ukwazi indawo yokuqeqeshwa kweMaggot kunye nendawo yefama ye-BSF engasondeleyo, yanamhlanje, engabikhoyo kwi-city yakho?
Le ndlela inefolthi engenanto ifowuni apho ukhona khona ngoku.
Bese uchofoze SEARCH
Incwadi Ngoku, Biza u-Yurie BSF
Iimephu ezidweliswe kwiprogram zichanekile ngenxa yokunciphisa ubuchwepheshe bwakutshanje.
Ukufundwa koqeqesho nceda uqhagamshelane no-Yurie BSF 0812-2105-2808
Indlela yokulima i-BSF yeMaggot
Indlela yokuhlakulela iMaggot
Indlela efanelekileyo yokuhlakulela i-Magfot BSF ukufumana intengo yokuthengisa iMaggot iyaxoxwa ngokucacileyo ngokuqala ukulungiselela amaqanda e-BSF, ukuvuna i-maggot ngokuzenzekelayo.
Kukho iindlela ezininzi zokufunda ukulima umbane we-BSF, ezona ziqhelekileyo zizifunda okanye zifundiswe kunye nezinye iindlela ngokuthatha uqeqesho lokulima.
Kukho iindlela zokufunda ukulima kwe-Maggot ye-BSF ngokujoyina amaqela okanye uluntu. Inkqubo nganye inezinzuzo kunye nezibi.
Khetha nje into efanelekileyo ifanelwe "isitayela" sakho. Ezinye zilula ukuqonda ngokufunda, ezinye zikhetha ukufunda ngokujonga iividiyo zokufundisa, kwaye ezinye zikhetha ukuzisebenzisa ngokuthe ngqo kwifama.
Indlela yokuhlakulela ama-magots e-BSF naphi na apho wenza khona. Xa nje unelisekile ngeziphumo. kwaye ngokuqinisekileyo iziphumo apha zikwazi ukuhlangabezana neemfuno zokutya kwezilwanyana.
I-Maggot Business Business
Emva kokuba unomthi, ngaphandle kwezinto zakho zokutya kwezilwanyana, kufuneka uthengise umlenze ukuba iimfuno zakho zizalisekile. Ngaphandle kwendlela yokulima ye-mags, ukulima kwamagqabantshintshi kukwahlula ngokusekelwe kumlinganiselo we shishini.
UkuHlalwa kweMaggot yaseKhaya
Iindidi zoshishini zeMagot zihlulwe zibe zilinganiso ezincinane (ikhaya), ubukhulu obuphakathi kunye noshishino. Ngokusekelwe kumava kukulungele ukuqala kwiklasi elincinci okanye ekhaya kuqala, ngaphandle kwendleko enzima ayinzima, into ebalulekileyo kukuba uqala ukuqonda ukuphuma kunye nokuphuma kwe-BSF umlenze wokulima.
Kwinkqubo emva kokutshala i-magot kumjikelezo wesithathu nowesine njalonjalo, ngoko ukulima komgogodla kuya kuba mnandi kwaye kuvelise iziphumo.
Yiba nesineke xa ujikeleza enye, ezimbini kunye nantathu, apho uphakathi kokufunda, akukhuthazwa ukuba udle itoni enye ngosuku ukuba awufumani ikhi enye ngosuku.
Kuyafaneleka ukuba unqwenele ukuba ube yinto engokoqobo kodwa ulungelelaniswe nobuchule bobuqu, izinto eziphathekayo, izibonelelo kunye nabanye abaxhasi.
Ukuba ungumhlobo othanda ukufundisisa ngokwakho, nceda landela isikhokelo esipheleleyo ukususela ekuqaleni ukuthengisa nokuthengisa i-BSF umgogodla
Gqibelela Isikhokelo Sendlela Yokuhlakulela AmaMaggots
Indlela yokwenza iMaggot ibe ngondlo lwezilwanyana
(IMasta iMaggot, iMaggot Flour, iPellet Pellet)
Imibuzo neempendulo malunga nokuhlakulela amaMaggots
I-BSF Marketing Magic
Khetha Ukusebenza ngokuthe ngqo kwi-Ranch
Kukho i-99 enye Indawo yeMaggot ye-BSF engenasiphelo
Kodwa ukuba ukhetha ukufunda ngendlela efanelekileyo kwaye ngokukhawuleza kukho iziphumo. Unokufunda ngokuza ngokuzenzekelayo epulazini kwisixeko esiseduze kuwe. Ukhetha nje isixeko esiseduze ukuba ufunde ngezolimo ze-BSG zemilenze zanamhlanje.
Ukulima kweMiggots ephakathi kunye neNkulu
Ukuqala ishishini lemfuyo eliphakathi kunye nelikhulu, ngokuqinisekileyo kufuneka ulungiselele konke okukhulileyo kunye nokucwangcisiweyo.
Ngenxa yokuba uqale imfuyo yeemfuyo ephakathi, awukwazi ukwenza ngokulula kwaye uzame. Ukongeza kokuchitha ixesha, amandla kunye nengqondo, ngokuqinisekileyo ezinye izinto ezingonakaliyo ziyimali.
Ukungathethi umthwalo wengqondo ngenxa yokungaphumeleli kuya kubangela ukungabi nzuzo kwikamva lakho. Ziziphi iimanyathelo ezifunekayo ukuba zifundwe kwaye zibe yinkxalabo yethu xa sifuna i-business maggot kwizinga eliphakathi?
Into yokuqala omele uyenze ihamba kwinkqubo yokuqala ekhaya, kwaye uyihlakulele ekhaya okanye kwisikhulu esikhulu. Ukuze i-capital capital ibe sisiseko sethu esisisiseko ekuphuhliseni ishishini lokulima umlenze olandelayo.
Ezinye izinto zobuchwepheshe ngaphambi kokuqala ishishini kufuneka siyiqwalasele:
Ubukho bezinto ezinobungozi, oku kuthetha ukuba kukho ukulungelelwa kwengqondo nokulungiselela ukucwangcisa okuncinisekileyo ukuze ishishini lokulima umlingo olungenasiphelo lisebenze kakuhle.
Izinto esiza kuzenza ngaphambi kokuqala ishishini ziqale
Ukuziqhelisa ukuba ishishini lokulima umlingo liyisisombululo ekuphuculeni ngokwakho kunye nangcono kwezezimali kwixesha elizayo.
Ukuqokelela inkunzi yoshishini le-BSF
Yakha isicwangciso soshishino.
Nazi ezinye izinto ezibalulekileyo ezifuneka ukuba zilungiselelwe
Ukuba senza ibhizinisi okanye umntu ngamnye, akukho mfuneko yokufumana iqabane lomashishini. Kodwa ukuba sifuna ukwakha inkampani, kufuneka wenze iqela lempumelelo.
Qala ngokukhangela abantu abanokuthenjwa, umsebenzi osebenzayo kunye nendawo abantu abalungileyo kwindawo efanelekileyo.
Gxininisa ekukhetheni uhlobo lweeMaggot
Uninzi olukhethiweyo kwishishini lokulima umlingo, ekuqaleni kwekhosi kufuneka uhambe kwinkqubo yokwakha imveliso yamaggot okuvelisa izilwanyana ezininzi kunye neeninzi.
Kwixesha elide, qiniseka ukuba wakha ishishini lokulima ukuhlaziywa kwe-BSF ngaphandle kokuvumba. Enye into ebalulekileyo yokhuseleko kunye nentuthuzelo yokuyiqhuba ngoku ngokuyiminyaka emashumi ezayo.
Ukuba umveliso wakho umlenze usabuncwane, lungise ukuze ungabizi iingxaki kuluntu. Abaninzi abasomashishini abasemagqabini abangabalulekanga ngokukhuseleko ngoku bavaliwe ngenxa yokubonakalisa uluntu.
Emva kokukwazi ukuhlakulela umququ ngaphandle kokuhogela, isinyathelo esilandelayo kukugxila kwizodwa kwi-business maggot.
Nazi iiMveliso zeMaggot ezenziwayo
Umanyolo otywala oMzimba
- Iklasi ye-Organic Liquid Fertilizer
- Iklasi B I-Organic Liquid Fertilizer
Umanyolo oMzimba oQinisekileyo
Iklasi A isichumisi esisisigxina se-Organic
Isicatshulwa saseBakala B esisisigxina
I-BSF entsha i-Larvae
Ukutya kwezilwanyana zeMaggot (i-Maggot Pasta, i-Maggot Flour.
Imveliso ye-Agro (iziPhumbiso, iCandelo elongezelelweyo leZibonelelo, Ukwakha i-Factory Food)
Ukuqeqeshwa kweMaggot Ukuqeqeshwa
I-Maggot Consultant Business
Yonke imveliso kunye nekhono loshishino linethuba elihle kakhulu, jonga ukuba zingaphi iiforikhi zokutya zezilwanyana ezikufutshane.
Oku kubonisa ukuba lukhulu kangakanani ubungakanani bemveliso yezilwanyana ezisekelwe kumagosa.
Khetha kwaye ucwangcise uhlobo lwezoshishino ofuna ukuzenza ngalo, cingisisa ngaphambi kokuthatha isigqibo. Musa ukukhetha ukuba sikhethe ngokungalunganga kuba silandela.
Ziziphi iimveliso okanye iinkonzo ofuna ukuzenza? Ukuhanjiswa njani? Ungayithengisa njani? Bangobani abantu abaya kuwuqhuba? Iyintoni intengo yokuthengisa ngokukhuphisana? Uyikhuthaza njani?
Hlonipha nendlela yokwenza imveliso yomveliso ekhangayo kangangoko kunokwenzeka emehlweni yabathengi. Cwangcisa kwaye ulungiselele ngaphambi kokuba uqalise ishishini le-maggot.
Yazi i-Market Maggot Market (SWOT)
Yenza uphando kwaye wenze uhlalutyo lweemarike ukufumanisa ukuba yeyiphi iqela lakho leemarike, ngakumbi abo baza kuba yinto ekujoliswe kuyo kwimashishini akho.
Fumana izimvo zakho zeemarike kunye nezimvo malunga ne-business maggot oza kuqala. Kwaye akukho nto ingabalulekanga abakhuphiswano abakhona ukuba balungiselele amacebo ekuphumeleleni imarike.
Ukukhetha igama loShishino
Amagama ashishino abaluleke kakhulu kwimisebenzi yezoshishino. Khetha igama elilula ukulikhumbula kwaye limele umzamo we-magg we-BSF.
Iingxowa-mali eziphambili Iphi na ishishini lakho mali? Ingaba ivela kumntu oyintloko okanye inkunzi enkulu? Ukuba imali oyicebayo ayikho i-100% yemali yomntu.
Emva koko unokuqhagamshelana neenkonzo zesebe ezibonelela ngeenkonzo zemali ezifana ne:
Ukwenza Isicwangciso Soshishino
Isicwangciso seshishini kukushicilelwa okwesibhakabhaka kwishishini lakho, ukucwangcisa, ukudala umbono weenkampani kunye nomsebenzi, okwenza ujoliswe kuyo ofuna ukufezekisa?
Cwangcisa isicwangciso sokukhuthaza nokuthengisa kwimveliso yamaggot efanelekileyo ukuba yinxalenye yeemarike zokutya kwezilwanyana njl.
Yenza isicwangciso soshishino ngokucophelela, ngokucokisekileyo ukuze ungabi nzima xa uhlala kuyo. Ngoko ukuba ishishini lakho licacile malunga nekhokelo kunye nenjongo kunye nenkqubela yayo.
Ukumisela indawo yoShishino
Indawo yoshishino yeMaggot ifuna indawo eqhinga. Khangela indawo ezilula ukufikelela ezokuthutha,
Sondeza kwimithombo yendalo yemidiya kunye nesondlo se-maggot, uncedise izixhobo ezigqibeleleyo kwaye kulula ukufumana abasebenzi.
Khetha abasebenzi ngokucophelela. Enye into ebalulekileyo ekufezeni impumelelo kukufumana abasebenzi abangakwaziyo ukusebenza kuphela kodwa banokuthenjwa.
Iinkampani ezininzi ziye zaphazamiseka ngenxa yokuba "umntu" kwinkampani egxothayo kwaye ithwale ishishini elihlala egameni layo.
Ukulawula iMvume yeMashishini yeMaggot
Ilayisenisi yezo shishino yinkalo yobulungisa emehlweni omthetho kunye nobungqina bokuba ungumhlali olungileyo ngokuhlawula irhafu yoshishino kamva.
Funda kwaye uqonde imisebenzi yokulima umlingo ukususela ekulungiseleleni umzimba kunye neengqinisiso kunye namanyathelo okuza kwenzeka ngexesha elizayo xa ukulima kusebenza.
Yenza iCage efana ne-BSF
Inkqubo ye-BSF njengenqanaba iqhuma xa ichithwa kwaye ivelisa ukuvelisa amaqanda amaninzi.
Ukuzaliswa kwe-BSf yinto ebalulekileyo efunekayo ukuxhasa ukuqhuba kakuhle kwezinto ze-BSF zokulima.
I-enclosure efanelekileyo kunye ne-BSF ekhethiweyo iya kunceda ukuvelisa amaqanda e-BSF kunye nokuncedisa ukugcinwa kwimihla ngemihla ye-BSF, kubandakanywa izimo zakhiwo ezifana nendawo yokuhlala yaseburhulumenteni emnyama ephaphazelayo.
I-enclosure ye-BSf kufuneka ikwazi ukudala induduzo ye-BSF. Iikhrayitheriya zeCage ezithandwa yi-BSF:
Izinto zeNgcaciso zeBSF
Ubukhulu obufanelekileyo (ubude x ububanzi x ukuphakama nokuphakama kwesigxina se-BSF)
Ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe, jonga ividiyo yokufundisa ngendlela yokwenza ngayo ibhokhwe isosha elimnyama libaleka.
Izixhobo zoLimo kunye nokuCwangciswa kwezixhobo
Izixhobo ezibalulekileyo kunye nezixhobo nazo ukwenzela ukuxhasa ukusetyenziswa kakuhle komsebenzi wokulima. Izixhobo kunye nezixhobo ezifana:
Ukufumaneka kweendawo zeqanda,
Ukutya nokusela kwindawo yeeFFF,
Indawo yokukhulisa iMaggot,
Indawo yokukhulisa i-BioTong
Ukutya kunye nokuLungiswa kweMaggot Media
Enye yeenjongo eziphambili zokulima umlingo kukufumana imali yokugcina imali yokutya kwezilwanyana ukuya kwi-82% yeendleko ezipheleleyo zokutya ngexesha lokuveliswa kweentlanzi neenkukhu.
Ngoko-ke sebenzisa ukutya okungafunekiyo kunye ne-maggot media ezifana nenkunkuma yendlu, inkunkuma yekhishini, inkunkuma yemarike ngendlela yemifuno neziqhamo.
Amanye amaphephandaba angaba yinkomo yenkomo, iibhokhwe, unogwaja, amadada, iinkukhu zeehagu zeehagu kunye nomgquba wehashe njl.
Ukutya kunye neMidiya
Ukutya kunye namajelo afana kakhulu kunye nokukhula okuphezulu kunye nemveliso yombane kunye nokusebenza kweendleko.
Ukutya kudlala indima enkulu ekukhuleni kwezibungu ngenxa yokutya okwaneleyo kukunceda ukukhula kwezibungu ngokukhawuleza nangokucutha.
Ukuhlakulela iimfolothi ze-BSF zanamhlanje kungabi nzima, kodwa kusekufuneka ukuba ulawulo olufanelekileyo. Ngokukodwa ukuba ukulima akulona nje ilingo kunye nephutha.
I-ASF yeqanda elikhupha amajelo angaba nayiphi na uhlobo kwaye idlalwa ngamabhokisi amancinci afana neebhasi kunye nee-trays okanye ngendlela yebhokisi lesikwere.
Apha amaqanda e-BSF ahlonywe kwi-magot aze adluliselwe kwi-BioTong yokwandisa ...
Lungiselela igumbi lokukhangela kunye neshefu ukubeka i-tray kakuhle kwaye kulula ukuyibeka nokugcina imihla ngemihla.
Ukusetyenziswa kwe-BioTong kwinqanaba eliphakathi ngokuqinisekileyo lihluke kwinqanaba lekhaya, kodwa umgaqo uhlala ufana nalapho iBooTong inomxholo we-2, i-BioTong ngaphandle kwempambu njengendlela yokukhulisa iindawo ezincinci kunye ne-BioTong ngesipambu njengesixhobo sokufuduka kwe-prepupa.
Ubungakanani beBooTong buhlengahlengele ukufumaneka komhlaba, lukulungiselele ngokufanelekileyo kwaye lulungiselele isicwangciso sokwandisa nokongeza i-BioTong xa izivuno zanda.
Management Management Processing
Ukulawula ukulawulwa kokufumaneka kwondlo kunye nemidiya yemaggot kufuneka ilungiswe kakuhle, kuba iindaba zendaba zifana nenkunkuma ye-organic, umgquba wemfuyo okanye inkunkuma yefriji enomdla wokunuka.